ယူနိုက်တက် က ဗီလာကို အနိုင်ရပြီး လီဗာပူးလ် ကို ဖိအားပေးလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်တယ် အိုဝင် – Myan Sports
ယူနိုက်တက် က ဗီလာကို အနိုင်ရပြီး လီဗာပူးလ် ကို ဖိအားပေးလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်တယ် အိုဝင်
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင် ကတော့ မနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းမှာ ကစားမယ့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ အက်စတွန်ဗီလာ အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းက (၂)ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။
အိုဝင် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်း ပွဲတွေခန့်မှန်းရာမှာ ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဝုလ်ဗ် အသင်းကို အနိုင်ရတဲ့ ပွဲမှာ‌တော့ အိုဝင် ဟာ ရလဒ်ပိုင်းအတိအကျပါ ခန့်မှန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်း အနိုင်ရမယ်လို့ ထပ်မံခန့်မှန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင် က “မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေအတွက် အမှတ်ရစရာခရစ္စမတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုးလ်ရှား ရဲ့အသင်းဟာ အမှတ်ပေးဇယား ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပြီး သူတို့ အနေနဲ့ လက်ကျန်ပွဲကို အနိုင်ရခဲ့ရင် လီဗာပူးလ် အသင်းနဲ့ အတူ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ပူးတွဲရပ်တည်နိုင်မှာပါ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ‌ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး(၉)ပွဲမှာ ရှုံးပွဲမရှိတာနဲ့ အတူ သရဲနီတို့ အတွက် အတော်လေးအလှည့်အပြောင်းဖြစ်ခဲ့တာပါ”
Manchester United’s French midfielder Paul Pogba celebrates scoring his team’s third goal with Manchester United’s English striker Mason Greenwood and Manchester United’s Portuguese midfielder Bruno Fernandes during the English Premier League football match between Aston Villa and Manchester United at Villa Park in Birmingham, central England on July 9, 2020. (Photo by Oli SCARFF / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by OLI SCARFF/POOL/AFP via Getty Images)
“သူတို့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် ဗီလာ အသင်းကလည်း အကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲလုံးရှုံးပွဲမရှိထားပါဘူး။ဗီလာ ဟာ တန်ပြန်တိုက်စစ်နဲ့ ယူနိုက်တက် ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ ကစားတွေကို အလှည့်ကျသုံးနိုင်တဲ့ လူအင်အားမရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့် ဒီပွဲမှာ ယူနိုက်တက်ကပဲ ရမှတ်တွေ ရယူသွားပါလိမ့်မယ်”လို့ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြကို ခန႔္မွန္းေပးေနတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ေဘာလုံးသမားေဟာင္း မိုက္ကယ္အိုဝင္ ကေတာ့ မနက္ျဖန္မနက္ပိုင္းမွာ ကစားမယ့္ မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ နဲ႔ အက္စတြန္ဗီလာ အသင္းရဲ့ပြဲစဥ္ကို ခန႔္မွန္းလိုက္ပါတယ္။ဒီပြဲမွာေတာ့ သူ႔ရဲ့အသင္းေဟာင္း မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္းက (၂)ဂိုး-ဂိုးမရွိနဲ႔ အနိုင္ရမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းလိုက္ပါတယ္။
အိုဝင္ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းေတြက မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္း ပြဲေတြခန႔္မွန္းရာမွာ ေျပာင္းျပန္ေတြျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈေတြျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံခဲ့ရတာပါ။ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ဝုလ္ဗ္ အသင္းကို အနိုင္ရတဲ့ ပြဲမွာ‌ေတာ့ အိုဝင္ ဟာ ရလဒ္ပိုင္းအတိအက်ပါ ခန႔္မွန္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခုလည္း မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္း အနိုင္ရမယ္လို႔ ထပ္မံခန႔္မွန္းေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
မိုက္ကယ္အိုဝင္ က “မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အမွတ္ရစရာခရစၥမတ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ဆိုးလ္ရွား ရဲ့အသင္းဟာ အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနၿပီး သူတို႔ အေနနဲ႔ လက္က်န္ပြဲကို အနိုင္ရခဲ့ရင္ လီဗာပူးလ္ အသင္းနဲ႔ အတူ အမွတ္ေပးဇယား ထိပ္ဆုံးေနရာမွာ ပူးတြဲရပ္တည္နိုင္မွာပါ။မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္းဟာ ‌ပရီးမီးယားလိဂ္ ေနာက္ဆုံး(၉)ပြဲမွာ ရႈံးပြဲမရွိတာနဲ႔ အတူ သရဲနီတို႔ အတြက္ အေတာ္ေလးအလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ခဲ့တာပါ”
“သူတို႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ဗီလာ အသင္းကလည္း အေကာင္းဆုံးပုံစံမွာရွိေနပါတယ္။ေနာက္ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ္(၅)ပြဲလုံးရႈံးပြဲမရွိထားပါဘူး။ဗီလာ ဟာ တန္ျပန္တိုက္စစ္နဲ႔ ယူနိုက္တက္ ကို ဒုကၡေပးနိုင္တယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာ ကစားေတြကို အလွည့္က်သုံးနိုင္တဲ့ လူအင္အားမရွိပါဘူး။အဲဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲမွာ ယူနိုက္တက္ကပဲ ရမွတ္ေတြ ရယူသြားပါလိမ့္မယ္”လို႔ ဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Previous Article ဖွားဘက်တော်ပေါ်အောင်အထိ ဆိုးဆိုးရွားရွားအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ ရာအူးလ်ဘိုဘာဒီလာ
Next Article နှစ်သစ်မှာ အနိုင်(၃)မှတ်နဲ့ ထိပ်ဆုံးက လီဗာပူးလ် ကို ရမှတ်တူဖိအားပေးလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်